Warqad furan bulshada
Marka aan bilowno sanad cusub, waxaan ku faraxsanahay inaan kula wadaagno machadka cusub ee McKnight Foundation Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah 2019-2021.
Guddigeennu waxay si gooni ah u ansixiyeen dukumiinti bishii November. Waxay ka tarjumaysaa dareenka la wadaago ee degdegga ah ee la siiyay marka la eego caqabadaha bulshada iyo qorshaynta ee maalintaas. Waxa kale oo ay ka turjumeysaa sida aan uga go'anahay in aan isticmaalno khayraadka Aasaasiga ah ee loogu talagalay tixgelinta, kalsoonida, iyo saameynta-dhan oo wada shaqeyn la leh deeq bixiyeyaasheenna iyo wada-hawlgalayaasha beesha.
Qaab-dhismeedka ayaa qeexaya hadafkayaga, qiyamkayaga, iyo qaybaha muhiimka ah ee habdhaqankiisa. Waxay nagu hagaajin doontaa habka loo dajiyo iyo go'aan qaadashada, waxayna nagu falanqeyn doontaa maaddaama aan isku kalsoon nahay cilaaqaadkeena, shaqadayada, saameynteena. Qaab-dhismeedkani wuxuu soo galayaa cidda aan maanta joogno marka aan kufiranno oo aan naga horjoogsanno rabitaan wadajir ah.
Maxaa cusub oo ku saabsan qaabka istaraatiijiga ah: Dhisida taariikhda iyo taariikhda tobnaad ee taariikhda aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee qoyska, waxaanu cusbooneysiinnay hawlahayaga, waxaanan hagaajinay habkayaga deeq-bixiyeyaasha si aan u muujinno waqtiyada isbeddelka. Hadafkayaga cusub waa inaan horumariyaan mustaqbal keli ah, hal abuur leh, iyo mustaqbal ballaaran oo ay dadku iyo meeraha u soo baxaan.
Hadafkayaga cusubi waa inaan hore u sii wadno kaliya, hal-abuur, iyo badan mustaqbalka halkaas oo dadka iyo meeraha ku koraan.
Qoraalkan hawlgalka ayaa ka soo baxay feker qotodheer iyo ula kac ah oo ku saabsan guddiga kiniisadda McKnight iyo shaqaalaha, oo saameeyay wixii aan soo maray iyo wax ka bartay bulshada guud. Waxaan aragnaa tallaabooyin iyo tusaalayaal maalin kasta oo ku soo koobaya hawsheenna cusub, xitaa markaan si cad u indhotirno oo ku saabsan ciidan gabbaad ah. Waxaan aaminsanahay in tani ay tahay waqti loogu yeerayo hay'adaha in ay noqdaan kuwo geesinimo leh iyo in la keeno maskax fara badan oo ballaariya fikradaha noocan ah ee suurtogalka ah. Qorshahan cusub ee Istiraatiijiga ah wuxuu naga caawin doonaa inaan labadaba sameyno.
Sida qaababka hore, waxaan soo qaadnay waxyaabo ilo badan oo fikrado iyo fikrado ah. Ka mid ah aragtida, waxaan gaar ahaan qadarineynaa kuwii aan ka soo qaadnay biomimicry, "habka ku wajahan naqshadaynta raadinta xalal waara ee caqabadaha bani-aadmiga ah iyada oo soo jiidanaysa qaababka iyo istiraatiijiyada waqtiga lagu tijaabiyay dabeecadda "iyo Hogaaminta Roots: Qodobbada Hogaanka Dabeecadda ah ee loogu talagalay Dunida Maanta by Kathleen E. Allen. Intaa waxaa dheer, daabacaadda ugu dambeysa ee FSG Isbedelka wuxuu ahaa waqtigii aan tixgelineyno fursadaha si aan u fiicneyn "ku haboonaanta shaqeynta" - qaabka naqshadeynta ee foomka uu ururku ku qaato waa inuu raaco ujeedada loojeedo.
"Waxaan rumaysanahay in tani ay tahay wakhti ay ugu yeerayso hay'adaha in ay noqdaan kuwo geesinimo leh iyo in ay keenaan maskax fara badan oo ballaariya maskaxdayada waxa suurtagal ah."
Qaab-dhismeedka Istaraatiijiyadeed ee cusubi waxay si dabiici ah u dhalin doonaan su'aalo ku saabsan waxa, haddii wax, laga bedeli karo McKnight. Waxaa laga yaabaa in ugu wanaagsan in la bilaabo waxa aan ognahay ma'aha isbedel.
Xarunta McKnight Foundation waxay ku taallaa aasaas qoys oo ku salaysan xiriirka qoto dheer ee dhamaan meelaha aan ka shaqeyno, gaar ahaan gobolka gobolka Minnesota. Waxaan dhab u haynaa nidaamyada muddada dheer ee habka fekerka ah ee aan marwalba u hayno, waxaana naga go'an inaanu hufnaadno, ixtiraamno, iyo sinaanta lamaanaheena iyo beelaheena.
Iyadoo la adeegsanayo ficil la qabsasho, guddiga iyo shaqaalaheena ayaa billaabi doona sidii loo ogaan lahaa sida aan uga jawaabi karno baahiyaha degdega ah ee waqtiyadan marka la eego qaabka Nidaamka Istaraatiijiga ah. Waxaan qiimeyn doonaa halka aan hadda ku suganahay, sida aan u sii wanaajin karno, iyo halka aan ku muransanahay in aan tagno. Waxaanu ku dhisi doonnaa xoogga shaqadeena hadda taagan markaad raadineyso siyaabo aad wax ku ool u noqoto oo aad u hubiso in nidaamyadayada iyo ficilladeenu ay ku habboon yihiin inay shaqeeyaan. Bilaha hore, waxaanu wadaagaynaa fikrado dheeraad ah oo ku saabsan saameynta qaab-dhismeedka cusub, oo ay ku jiraan haddii iyo sida istiraatiijiyadayadu ay u kobcinayaan.
Agaasimaha barnaamijka Midwest Climate & Energy Aimee Witteman iyo agaasimaha maalgashiga Elizabeth McGeveran ayaa ku kulmaya xafiisyada McKnight.
Agaasimaha Barnaamijka Waxbarashada Erin Imon Gavin wuxuu akhriyaa ardayda ku jirta Wellstone Elementary.
Agaasimaha barnaamijka farshaxanka Vickie Benson ayaa la hadlay xubno ka tirsan jaaliyada oo ku yaal ololaha fanka 'Juxtaposition Arts'.
Marka aynu dooranayno inaanu wadajir u galno mustaqbalka, ma caawin karno, laakiin xusuusno oo sharfino hore- ruuxa dhisay aasaaska qarniga afaraad ee qoyska. Aasaasaha William L. McKnight, oo ah hoggaamiye hore ee 3M, iyo xaaskiisa, Maude L. McKnight, oo ku jira aasaaska mabaadi'da asaasiga ah, cilmi-baarista caddaynta, iyo kartida dadka. Gabadhooda, Virginia McKnight Binger, waxay u keentay naxariisteeda, deeqsinimadeeda, iyo habka xiriirka ku salaysan, oo ah mid xooggan oo xooggan oo ku salaysan Maaliyadda ilaa maanta.
Waxaan ku qaadannaa marxaladoodii hore ee aynu ku noolnahay sidii aan ku bilaabi lahayn inaan ku noolnahay qaabkeena cusub ee istaraatiijiga ah. Waxaan ku haynaa maskaxdeena iyo qalbigeenna suurtogalnimada isbeddel sax ah-aasaas ahaan, bulsho ahaan, sida meeraha-waxaanu rajeyneynaa inaan kula shaqeyno si aan wax uga beddelno isbedelkaas.
Akhri Qaabka Qaabka Istiraatiijiga ee cusub ee McKnight